Radio Dhangadhi 90.5 MHz | गौरीप्रेम
Sunday, June 16 2019, 19:07 | आइतबार ०१, असार २०७६ १९:०७
मङ्गलबार, २६ बैशाख २०७४| Nirmala Khadayat
धनगढी, २६ बैशाख ।
हेल्लो नमस्ते ।
अर्को दिनमात्र रिप्लाई आयो, नमस्ते ।
आराम हुनुहुन्छ ?
बिरामी भए त हस्पिटल गैन्थ्यो नि ? लोल ।
अचेल त सामाजिक सञ्जालमा पनि डाक्टर थुप्रै भेटिन्छन् नि ।
सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका डाक्टर, चित्रमा भेटिएको अङ्गुर के गर्नु त रु लोल।
मैले रिक्वेस्ट पठाएको ठ्याक्कै ७ महिना ११ दिन भएछ तर स्वीकार भएन । कृपया मिल्छ भने कन्फर्म भन्ने जिनिसमा थिचिदिनु भए आभारी हुने थिएँ ।
ओह ! दिनै गनेर पो ? फेक जस्तो लागेर नि । न फोटो छ, न नाम पूरा छ । जे होस् स्टाटस राम्रा लागे ।
फोटो नराख्ने सबै फेक हुँदैनन् हजुर । कुरा आयो नामको शेक्सपियरले भनेझैँ नाममा के छ र ? त्यसै पनि मेरो त नाम छ नि, नलेखेको थर हो, थरमा के छ र ? हा हा ।
हस् एक्सेप्ट भयो । अहिले ढिला भयो मलाई, पछि कुरा गर्छु, सी यु ।
बाई लेख्न लाग्या थियो, सोच्यो ! महिनौंदेखि फलो गरेको मान्छे आज पहिलोपटक कुरा हुँदैछ । बाई लेख्न हुन्न । यत्तिकै छोड्यो र लेख्यो, हस्, सी यु, टेक केयर ।
अग्निलाई ठूलै प्यास मेटिएझैँ भयो । जसका तस्बिर र तस्बिरको सिरानमा लमतन्न पर्ने क्याप्सन भनौं– हरेक स्टाटसहरु खुब मन पर्थ्यो, अझ भनौं सम्पूर्ण मन पर्थ्यो । एकछिन टोलायो र फेरि इनबक्स हेर्‍यो । गौरीलाई एक्टिभ नाइन् मिनेट्स अगो देखेपछि अब गएकै हो भन्ने लाग्यो र फेरि घुम्न थाल्यो ड्युटीतिर । घरिघरि इन्बक्सतिर आँखा दौडाइरह्यो! अनलाइन देखिन्छ कि भनेर । दिनभरि दौडाइरह्यो । एक्टिभ टाइम लम्बिँदै गयो! वन हावर, टु हावर, हुँदै साँझ पर्‍यो! एक्टिभ नाउ देखिएन । ड्युटी सकेर कोठा फर्क्यो, खाना बनायो र फ्रेस हुन बाथरुम छिर्‍यो । नुहाइसकेर फेरि मोबाइल अन गर्‍यो । देख्यो हरियो बत्ती बलेको । हतार हतार लेख्यो, हाई ।
निकैबेर कुर्‍यो, सिन देखाएन । खाना खान लाग्यो । खाँदाखाँदै घन्टी बज्यो म्यासेन्जरको । हत्तपत्त हेर्‍यो । गौरीको रहेछ । खुसी हुँदै हात चुठ्यो र चम्चाले खाँदै च्याट गर्न थाल्यो ।
खाना खानुभयो ?
अघि नै, अनि तपाईंले ।
मैले भर्खर ।
किन ढिला ?
यहाँ भर्खर त ७ बज्यो ।
कहाँ हो र ?
ओह ! कति भयो ?
भयो एक–दुई साल ।
यत्तिकैमा फेरि अग्निले सोध्यो, हजुर के गर्नु हुन्छ रु भन्न मिल्छ ?
रात धेरै भयो, म सुतेको है गुडनाइट ।
आफ्नो प्रश्नको जवाफ गुडनाइट आयो । सोच्यो– साला कस्तो काम हो यो गुडनाइट रु थोरै खिन्न र थोरै मुस्कान मिसाएर फेरि खाना खान थाल्यो ।
गौरीले सोची ! ह्या नाम न ठेगानाको मान्छेसँग नि के कुरा गर्‍या होला मैले !
के ! के सोच्दासोच्दै निदाई ।
यता अग्नि कोल्टे फर्की–फर्की गौरीलाई आँखाभरि नचाइरह्यो । मनभरि फुलाइरह्यो सुनाखरी र मखमलीहरु । कतिबेला उज्यालो होला, फेरि कुरा गरूँला भनेर सोचिरह्यो । मनमा कुराहरुलाई चिँ मुसी चिँ खेलाउँदा खेलाउँदै निदायो ।
बिहान उठेर ओछ्यानबाटै आँखा मिच्दै डाटा अन् गर्‍यो । गौरीलाई अनलाइनमै देख्यो र लेख्यो, “हाई ! जीएम ।
सीन देखायो तर रिप्लाई आएन । फेरि लेख्यो, आर यु दिअर ?
रिप्लाई आएन । कुर्दाकुर्दै देखायो एक्टिभ सिक्स मिनट्स अगो ।
मन खल्लो भो एक्कासि ! किन बोल्नै छोडी रु कमसेकम सीन नदेखाको भए पनि त हुन्थ्यो रिप्लाई नगर्ने भए । कतै अरुले पनि चलाउँछ कि यो आईडी रु मनमा अनेक छालहरु आए । ड्युटी जान ढिला भैसकेछ । हतारहतार युनिफर्म लगायो र हिँड्यो ड्युटीतिर । सेक्युरिटी सुपरभाइजरको जागिर । फुर्सदिलो मान्छे ! बारम्बार अन्लाइन चेक गर्‍यो । दिनभर देखेन अनलाइन । ड्युटी सकियो । कोठामा आउनासाथ अनलाइन देखेर फेरि बोलायो ।
हेल्लो किन नबोल्नुभएको रु केही नराम्रो भने जस्तो लाग्दैन ।
धेरै बेरपछि रिप्लाई आयो, बिजी थिएँ । फेरि बोलिरहनु पर्ने काम पनि के छ र ?
काम हुनैपर्छ र साथीसँग कुरा गर्नलाई ?
हुन पर्दैन भनेर फेसबुकमा हुने सबैसँग कुरा गरेर साध्य पनि त हुँदैन ।
हामी क्लोज फ्रेन्ड बन्न सक्छौँ ? क्लोज फ्रेन्ड र नर्मल फ्रेन्ड त अलिक फरक होला अनि त साध्य होला नि । हा हा ।।।!
गौरीले रिसाउँदै भनी, तपाईंलाई चाहिँ किन क्लोज फ्रेन्ड बनाउनू नि रु त्यो पनि तपाईंजस्तो परिचय लुकाएर कुरा गर्नेसँग ! सबै केटा यस्तै हुन्छन् ! उभिने ठाउँ दियो भने बस्ने ठाउँ खोज्छन् । बस्ने ठाउँ दियो भने सुत्ने ठाउँ खोज्छन् । अस्ति फ्रेन्ड, आज क्लोज फ्रेन्ड, अब पर्सितिर रोमियो बन्ने होला हैन ?
हो, तपाईंको लागि रोमियो पनि बन्न सक्छु ।
मलाई थाहा थियो यही भन्नुहुन्छ भनेर । आखिर तपाईं पनि एउटा केटा न हो । स्वार्थ पूरा नहुन्जेल प्रायः यसै भन्छन् । अस्तिमात्र मेरी साथी दीपालाई डेढ वर्ष हल्लाएर एउटा यस्तै भन्ने साथी भूमिगत भयो । तपाईंलाई थाहा छ म कस्ती मान्छे हो ? मेरो वास्तविकता सुन्नुभयो भने शायद आफैं ब्लक गर्नुहुन्छ ।
अब भयो । म्यासेज नपठाउनुहोला । सरी म अन्फ्रेन्ड गर्दैछु । बाई ‘।!
क्या रोमियो सोमियोको लफडामा फस्यो यार फेरि । ठिकै त चल्दै थियो । के थियो हतार र मैले यो क्लोज फ्रेन्ड, रोमियो अहिले बन्नपर्ने ? आफैंलाई प्रश्न गर्दा गर्दै फेरि म्यासेज पठायो ।
गौरीजी सरी । म तपाईंको डाइहार्ड फ्यान पनि हो । मेरो कुराले मन नदुखाउनू । म फेक हैन । मेरो बारेमा बताउँला । मिल्छ भने एकपटक फेरि एड गर्नुहोला ।
दिनभरि व्यस्त भई गौरी । साँझ परेपछि फेसबुक खोली । म्यासेज पढी । अनौठो लाग्यो । किन यो मान्छे यति धेरै पछि लाग्या होला ? एक९दुई ओटा कविता र झारेझुरे स्टाटस पढेरै फ्यान भएको हो त ? एक्लै मुस्कुराई र एक्सेप्ट गरी तर जवाफ नफर्काई सुती ।
बिहानै उठेर अग्निले हेर्‍यो– दुई म्यासेज, सात नोटिफिकेसन रहेछन् । म्यासेज खोल्यो ! दुबै ग्रुप च्याटका रहेछन् । नोटिफिकेसन खोल्यो ! चौथोमा थियो गौरी एक्सेप्टेड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट ।
खुसी हुँदै भन्यो, कम्सेकम म्यासेज त रिप्लाई गर्नुपर्छ ।
शनिबारको दिन गौरी अलि ढिला उठी । कपडा धोई, नुहाइधुवाइ गरी र फेसबुक खोली । अग्निले फेरि म्यासेज पठाएछ, गौरीजी ! म तपाईंसँग नजिक हुन चाहन्छु । हरेक कुराहरु सेयर गर्न चाहन्छु । किनकिन मनले धेरै नै विश्वास गर्छ तपाईंलाई । पाथीभराको कसम म फेक हैन । मिल्छ भने मेसेन्जरमा कल गर्नू ल ।
गौरीले सोची– हुन त अचेल धेरै झुट बोल्नेले नै छिटो कसम खान्छन् । जेसुकै होस् मलाई के मतलब ! एकपटक आफ्नो वास्तविकता बताइदिन्छु, कमसेकम पछि लाग्न त छोड्छ ।
अग्नि अनलाइनमै थियो ! सीधै कल हानी ।
अग्निले काट्यो । र, म्यासेज लेख्यो, सरी, अलिक बिजी छु, आधा घण्टापछि कलब्याक गर्छु ल ।
गौरीले हेरी तर केही लेखिन ।
यता ड्युटीको अनुकूल मिलायो । बिरामी भएको बहाना गरेर आजलाई बिदा मिलाएर कोठा फर्क्यो र कल गर्‍यो अग्निले ।
उठेन, फेरि गर्‍यो ।
यसपटक भने फोन उठाएर गौरीले भनी, हलो !
हेल्लो नमस्ते । सन्चै हुनुहुन्छ ?
ठीक छु ।
के गर्दै हुनुहुन्छ ?
बसिराछु । किन कल गर्न भन्नुभको ? हिजोअस्ति भेटेको मान्छेसँग किन यसरी पछि लगिराख्नु भको ?
किनकि तपाईं मन पर्छ ।
ह्वाट ? फेरि त्यही कुरा रु प्लिज तपाईंले मलाई बुझ्नुभएको छैन । बेकारमा यो हावाको तालमा यस्ता कुरा नगर्नू ।
पाथीभरा माताको कसम ।
सुन्न सक्नुहुन्छ रु म मेरो कहानी भन्छु । तर एउटा सर्तमा।।।
सर्त मञ्जुर !
चुपचाप सुन्नुपर्छ । भनिसकेर म फोन काट्नेछु । त्यसपछि तपाईंले सीधा ब्लक गर्नुपर्नेछ ।
तपाईं को हो, के हो म जान्दिनँ र जान्न पनि चाहन्नँ । हाम्रो पहाड घर ताप्लेजुङ थियो । त्यहाँको स्कुलमा ८ कक्षामा पढ्दा नै एउटा नेवार केटासँग प्रेम भयो । हामीले सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने कसम पनि खाएका थियौं । उसको नाम शारद शाक्य थियो । पछि स्कुलमा हेडसरले आफ्नै विद्यार्थी केटीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको थाहा भयो । स्कुलमा सबै मिलेर हेडसरविरुद्ध आन्दोलन गरियो । तर, हाम्रो केही लागेन बरु सरले भोलिपल्ट शारदलाई अफिसमा बोलाएर साफ पिट्नुभएछ । त्यही रिसले ऊ माओवादीमा गयो । गएपछि दुईओटा चिठी पठायो । त्यसपछि कता भूमिगत भयो, अत्तोपत्तो भएन । केही महिनापछि हामी काठमाडौं बसाइँ आयौं । यतै पढियो, धेरै पछिसम्म बाटो हेरियो९ शारद आएन । पछि नागारिकता बनाउन बुबासँग पहाड जाँदा एक९दुई जनालाई सोधेँ– कसैले थाहा छैन भने । कसैले सोलुको दोहोरो भिडन्तमा मर्‍यो रे भने । हामी चार दिन बसेर काठमान्डू फर्कियौं ।
यहीँ बीबीएस पढ्दापढ्दै मलाई बिहे गर्ने प्रेसर आयो । दाइकै साथी इन्स्पेक्टर रितेश क्षेत्रीसँग बिहे भो । हामी भैरहवा बस्थ्यौं । बिहे गरेको दुई वर्ष भाथ्यो । एकदिन भैरहवाबाट काठमान्डू जाने क्रममा प्लेन क्रास भएर उहाँ बित्नुभयो । अहिले मसँग उहाँको चिनो छोरी छिन् गौरीशा । यो मैले नै राखेको नाम हो९ गौरी, रितेश र मेरो फस्ट लभ शारदको नाममा । अहिले म र गौरीशा बुबा९ममीसँगै बस्छौँ धुम्बाराहीमा । र, यहीँको एउटा बोर्डिङमा टिचिङ गर्छु ।‘। बुझ्नुभो रु कृपया अब आईन्दा डिस्टर्ब नगर्नु होला । धन्यवाद । ‘ टुँ टुँ ‘ !
अग्निका आँखाबाट अघि नै आँसु झरिसकेछन्९ ऊ आफैंलाई थाहा भएन । फोन काटिसकेपछि सातो हराएको मान्छेजस्तै भयो । एकछिन टोलायो र जुरुक्क उठेर बाथरुम गयो ।
फर्किएर आयो । आदेश त थियो फोन काटेपछि ब्लक गर्नुपर्ने तर उसले फेरि म्यासेज लेख्यो ।
गौरी ! धेरै कुरा थाहा थियो, सबै कुरा थाहा थिएन । सुनेर धेरै दुस्ख लाग्यो । गर्नुपर्ने मैले ब्लक थियो तर म्यासेज गर्दैछु । यो सुनेर तिमीप्रतिको चाह, माया झन् चुलियो सगरमाथाभन्दा धेरै अग्लो भएर ।
सेन्ड गर्‍यो ।
फेरि एल्बममा भएका दुई ओटा तस्बिर मोबाइलको क्यामेराले कैद गर्‍यो । एउटा केटा र एउटी केटी गुराँस टिप्दै गरेको, एउटा सेतो सर्ट र नीलो पाईन्ट लगाएर किताब बोकेर उभिएको सिंगल, खिच्यो एउटा सेल्फी अनि पठाइदियो तीनओटा तस्बिर र लेख्यो फेरि म्यासेज, गौरी १ मैले पत्तो लगाएर, बुझेर नै पछि लागेको हुँ । म त अहिले पनि तिम्रै नाममा बाँचेको छु । त्यही गौरी बस्नेतका नाममा । म त्यही तिम्रो शारद हुँ गौरी । अझै पनि यो छातीमा उही गौरी प्रेम छ । यी आँखामा भनौं या यो जीवनमा९ उही गौरी प्रेम छ । अग्नि त पार्टीले दिएको नाम हो । झूटो हल्ला फैलिएछ म मरेको भनेर, म मरेको थिइनँ । भूमिगत जरुर भएको थिएँ । पछि गाउँ फर्किएर तिम्लाई खोज्न राजधानी नआएको हैन । तर कतै पत्तो नलागेर हैरान हुँदै विदेश आएको थिएँ । नपत्याए हेर तिम्रा मेरा ऊ बेलाका तस्बिरहरु । आई लभ यु ।
एकैछिनमा उता म्यासेज सिन देखायो । अग्नि दुस्ख र खुसीको संयुक्त पोको बोकेर लाग्यो मार्केटतिर ।
बाह्रखरीबाट साभार गरिएको ।
मङ्गलबार २६, बैशाख २०७४ ०५:२७ मा प्रकाशित ।
सबैको सम्झनामा देवकोटा
मदनकृष्णको आत्मकथा ‘महको म’ विमोचन
कक्षामा अध्ययनरत करिष्मा मानन्धर भन्छिन्– फिल्ममा त ‘डक्टर’ नै गरेँजस्तो लाग्छ
जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई किन राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएन?
यसबर्ष मदन पुरस्कारको दाबी गर्ने उत्कृष्ट पुस्तकहरुको सूची सार्वजनिक
स्थानीयस्तरका कलासंस्कृति राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन अनुसन्धान
हरीबहादुर किताब यात्रा धनगढीमा
हरिवंश आचार्यको उपन्यास ‘हरिबहादुर’ आउँदै